अहिले छैनन् टेकु अस्पतालको भुइँभरी कोरोना संक्रमित :: Setopati
अहिले छैनन् टेकु अस्पतालको भुइँभरी कोरोना संक्रमित
विवेक राई काठमाडौं, जेठ २१
वैशाखको दोस्रो सातातिर टेकु अस्पताल छिर्नासाथ परैबाट कोरोनाका विरामीहरू कोही भुइँमा लडेका, कोही कुर्सी र बेन्चमा अडेस लागेका देखिन्थे। भुइँमा लडेका होस् वा कुर्सीमा अडेस लागेका, सबै विरामीको नाकमा अक्सिजन पाइप घुसारिएको हुन्थ्यो।
कति विरामीहरू त ठाउँ नभएर एउटै बेन्चमा पनि घुस्रिरहेका हुन्थे। उनीहरूका लागि अस्पतालमा एउटा पनि बेड खाली थिएन। वार्ड र इमर्जेन्सी नै खचाखच थियो।
अर्को कुरा बाहिर उपाचररत ती विरामीहरू सामान्य अवस्थाका थिएनन्। उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि आइसियू चाहिनसक्ने उपचारमा खटिएका डा. श्रवणकुमार मण्डलले बताएका थिए। उनले आइसियू चाहिने विरामीलाई पनि 'हाइ फ्लो' मा अक्सिजन दिएर इमर्जेन्सीमै राखेर उपचार गरिएको जनाएका थिए।
यद्यपी अधिकांश बिरामीहरू टेकु अस्पताल नै आइपुग्थे। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने देशकै पहिलो अस्पताल भएकाले पनि होला धेरैलाई अन्त कतै ठाउँ नपाए पनि टेकु अस्पतालमा पक्कै पाइन्छ भन्ने आशा लाग्थ्यो। त्यसैले विरामीहरू एकपटक टेकु अस्पताल आइछाड्थे।
अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले भने, 'त्यो बेला विरामीहरूले बरू मलाई बेड चाहिँदैन, अक्सिजन सुघ्‍न मात्रै दिए पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो सुनेपछि हामीले विरामीलाई कुर्सी र बेन्चमै राखेर पनि उपचार गर्‍यौं।'
त्यो बेला अरू अस्पतालमा जस्तो चरम अक्सिजन अभाव झेल्नुपरेन। किनकि, अस्पतालसँग २० हजार लिटर क्षमताको लिक्विड अक्सिजन ट्यांक थियो। बेलैमा जडान गरिएको उक्त ट्यांकले महामारीमा टेकु अस्पताललाई ठूलो राहत मिल्यो। त्यो बेला धेरै अस्पतालले अक्सिजन नभएको भन्दै थप विरामीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाइरहेका थिए।
टेकु अस्पतालमा भने अक्सिजनको हाहाकार चाहिँ भएन। त्यसले गर्दा पनि अस्पतालले विरामीलाई बाहिरै राखेर पनि अक्सिजनको साहयतामा उपचार गर्‍यो। त्यो बीचमा अस्पतालले आइसियू र भेन्टिलेटर चाहिन सक्ने विरामीका लागि मात्र बेड उपलब्ध गराउन सकेन। किनकि, अस्पतालको २४ बेडको आइसियू सबै भरिएका थिए। तर त्यसबाहेक अक्सिजन मात्र चाहिने विरामीलाई भने सकभर नफर्काइएको निर्देशक राजभण्डारी बताउँछन्।
'यहाँ आउने विरामी सबै नै निम्म वर्गका हुन्छन्। अनि उहाँहरूलाई बेड छैन भनेर महंगो अस्पताल जानुस् भनेर कसरी भन्ने? त्यसलै सकेको व्यवस्थापन गरेर उपचार गर्यौं,' उनले भने।
तर पछिल्लो एक साता यता टेकु अस्पतालको दृश्य बदलिएको छ। पहिलेजस्तो अस्पताल छिर्नुवित्तिकै परैबाट संक्रमितहरू भुइँमा लडेका वा कुर्सी र बेन्चमा अडेस लागेका देखिँदैनन्। बाहिरपट्टी नयाँ बनाइएको अस्थायी टहरमा पनि अहिले संक्रमित छैनन्। केही साताअघि भने उक्त टहरामा समेत संक्रमित राखिएको थियो। बाहिर रहेका विरामीलाई पानी पर्दा समस्या परेको देखिएपछि अस्पतालले अस्थायी टहर बनाएर विरामीलाई त्यहाँ राखेको थियो।
अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बाँस्तोका अनुसार अहिले अस्पतालमा संक्रमितको चाप झन्डै आधा कम भएको छ। उनले अहिले करीब ७५ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको भन्दै संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको बेला एक सय ३० जना बढी संक्रमितको उपचाररत रहेको जनाए।
'त्यतिबेला त वार्ड नै आइसियू जस्तो भएको थियो। इमर्जेन्सीमै ६० भन्दा बढी विरामीको उपचार गरियो। अहिले त इमर्जेन्सीमा दुईतीन जना विरामी मात्र छन्। विरामीको संख्या निकै कम भएको छ,' डा. बाँस्तोलाले भने।
डा. बाँस्तोलाले अहिले नयाँ विरामी भर्ना हुने संख्यामै निकै कमी आएको बताए। उनले अहिले दैनिक १० जना भन्दा कम विरामीहरू भर्ना भएको जनाए। अहिले भर्ना हुने विरामीहरूमा सिधै आइसियू खोज्दै आएका र बाहिरी जिल्लाबाट रिफर भएर आएकाहरू रहेको उनी बताउँछन्। बाँकी भर्ना हुने विरामीहरू भने सिकिस्त अवस्थाका नरहेको भन्दै अहिले भर्ना भएका विरामीलाई कम अक्सिजन दिनुपरेको पनि डा. बाँस्तोलले बताए।
'पहिले विरामीलाई पन्ध्रदेखि बीस लिटरसम्म अक्सिजन दिनुपर्थ्यो अहिले त दुई चार लिटर दिँदा नै पुग्छ। वार्डमा रहेका कति विरामीलाई त अक्सिजन दिनै पनि परेको छैन,' उनले भने।
पछिल्लो सातायता अस्पतालमा संक्रमितको चाप घटेको र यसले राम्रो अवस्थातिर उन्मुख भएको संकेत गरेको भन्दै डा. बाँस्तोलाले अहिले वैशाख पहिलो र दोस्रो साताको जस्तो अवस्था नरहेको जनाए। 'अहिले वैशाख पहिलो र दोस्रो साता महामारीको उच्च विन्दु पुगेको बेलाको अवस्था जस्तो छैन। धेरै राम्रो हुँदै गएको छ।'
पछिल्लो साता टेकुजस्तै उपत्यकाका धेरै जसो अस्पतालमा संक्रमितको चाप कम हुँदै गएको छ। आइसियू र भेन्टिलेटर भरिएको अवस्था यथावत रहेपनि इमर्जेन्सीमा भर्ना हुने संक्रमितको चाप भने घटेको छ। अहिले अक्सिजन साहयता मात्र चाहिने विरामीका लागि बेड नपाउने स्थिति नरहेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८, २०:५९:००